Teknika : havoaka ny fenitra itovian’ny fampianarana | NewsMada
Teknika : havoaka ny fenitra itovian’ny fampianarana
Manatanteraka atrikasa etsy Ampefiloha ho fankatoavana ny rafitra mifehy ny fampiofanana arakasa eny anivon’ny sekoly tsy miankina ireo tompon’andraikitra avy amin’ny sampan-draharaha nasionalin’ny fampianarana tsy miankina (Dinep) miaraka amin’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny fampananana asa.
Tanjon’ny atrikasa ny hampitovy tolotra sy ny lentan’ny fampianarana teknika amin’ny sehatra tsy miankina sy amin’ny fanjakana. Hatao izany mba tsy hamitahana ny ray aman-dreny mampiana-janaka sy ny tanora mianatra amin’ireny sekoly tsy miankina tsotsotra mameno ny elakelan-trano ireny.
Hamoaka ny fenitra sy rafitra iraisana tokony arahina sy tanterahina haingana amin’ny fampianarana teknika araka izany ireo mpizaika anio. An’arivony ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana mijorojoro etsy sy eroa.
Tokony hitondra amin’ny fampidirana eo amin’ny sehatry ny asa indrindra koa ny tolotra omen’ireny foibem-piofanana sy sekoly teknika tsy miankina ireny.
Mianatra amin’izy ireny ny ampahany betsaka amin’ny tanora malagasy noho ny havitsian’ny sekolim-panjakana. Tsy mahazo fankatoavana amin’ny minisiteran’ny Asa akory anefa ny diplaoma avoakan’ireny sekoly ireny raha ny fanazavana. Tsy nahazo fahazoan-dalana tamin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika ihany koa ny ankamaroan’ireny sekoly tsy miankina mitsangatsangana etsy sy eroa ireny.
Ho hentitra ny fanaraha-maso ny fampanarahan-dalana amin’ny fahazoana “agreement” sy “accreditation” hataon’ny minisitera manomboka eto. Anisan’ny tena hojerena ny fotodrafitrasa handraisana ireo mpianatra sy ny fitaovana ampiasaina.
Nanamarika koa ireo mpizaika fa mampisy fifaninanana tsy ara-drariny eo amin’ny samy sekoly ny gaboraraka misy. Matiantoka ireo sekoly sy foibem-piofanana teknika manara-dalàna sy manao tsara ny asany ary mikendry ny hahatafita ny mpianany fa tsy maim-bola toy ny sasany.